Internetka Waxyaabaha - Pandawill Technology Co., Ltd.
The Internetka Waxyaabaha (IoT) ayaa qaab leh. Caadi ahaan, IoT waxaa laga filayaa inay bixiso isku xirnaanta horumarsan ee aaladaha, nidaamyada, iyo adeegyada ka baxsan isgaarsiinta mashiinka ilaa mashiinka (M2M) oo daboolaya nidaamyo kala duwan, boggag, iyo codsiyo. Xiriirinta aaladahaan gundhigga ah (oo ay ku jiraan walxaha casriga ah) ), waxaa laga filayaa inay keento otomaatig ku dhowaad dhammaan dhinacyada. Waxaa lagu qiyaasay inay jiri doonaan ku dhowaad 26 bilyan oo qalab ah oo ku saabsan Internetka Waxyaabaha illaa sannadka 2020. Awoodda isku xidhka aaladaha gundhigga leh processor-kooda, xusuusta iyo awoodda korontada ayaa ka dhigan in IoT ay codsiyada ka hesho ku dhowaad goob kasta. Waa kuwan barnaamijyada waaweyn ee Internetka Waxyaabaha.
Codsiyada kormeerka deegaanka ee IoT waxay caadi ahaan u isticmaalaan dareemayaal si ay uga caawiyaan ilaalinta deegaanka iyagoo kormeeraya tayada hawada ama biyaha, jawiga ama xaaladaha carrada, xitaa waxay ku jiri karaan aagagga sida la socodka dhaqdhaqaaqa xayawaanka duurjoogta ah iyo degaankooda.
Qalabaynta Dhismaha iyo Guryaha
Qalabka IoT waxaa loo isticmaali karaa in lagu kormeero laguna xakameeyo aaladaha farsamada, korontada iyo elektarooniga ah ee loo isticmaalo noocyada kala duwan ee dhismayaasha (tusaale, dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, warshadaha, hay'adaha, ama guryaha la deggan yahay. Nidaamka otomatiga ee guryaha, sida nidaamyada kale ee otomatiga dhismaha, ayaa sida caadiga ah loo isticmaalaa in lagu xakamaynta laydhka, kululaynta, hawo-siinta, qaboojiyaha, qalabka, nidaamyada isgaarsiinta, madadaalada iyo aaladaha amniga guriga si loo wanaajiyo raaxada, raaxada, waxtarka tamarta, iyo amniga.
Isku-darka nidaamyada dareemayaasha iyo dhaqdhaqaaqa, ee ku xiran internetka, waxay u badan tahay inay xoojiso isticmaalka tamarta guud ahaan.Waxaa la filayaa in aaladaha IoT lagu dhex dari doono dhammaan noocyada aaladaha tamarta cunaya isla markaana ay awood u yeelan karaan inay la xiriiraan shirkadda soo saarta adeegga. Qalabkaani wuxuu sidoo kale fursad u siinayaa dadka isticmaala inay si fog u xakameeyaan aaladooda, ama ay si dhex dhexaad ah ugu maareeyaan iyaga oo adeegsanaya dariiqa ku saleysan daruuriga ah, ayna awood u siinayaan howlaha horumarsan sida jadwalka.
Nidaamyada Caafimaadka iyo Caafimaadka
Qalabka IoT waxaa loo isticmaali karaa si loogu suurtogeliyo kormeerka caafimaadka fog iyo nidaamyada ogeysiinta xaaladaha degdegga ah. Qalabkan lasocodka caafimaadku wuxuu udhaxeyn karaa cadaadiska dhiigga iyo kormeerayaasha garaaca wadnaha ilaa qalab casri ah oo awood u leh la socoshada maqaar galaha khaaska ah, sida qalabka wadnaha lagu xiro ama qalabka gargaarka maqalka oo sareeya. Dareemayaal qaas ah ayaa sidoo kale lagu qalabeyn karaa meelaha lagu nool yahay si loola socdo caafimaadka iyo caafimaadka guud ee dadka da'da ah. Muwaadiniinta, iyada oo sidoo kale la hubinayo in daaweynta saxda ah la maamulo iyo ka caawinta dadka inay dib u helaan dhaqdhaqaaqoodii lumay iyada oo loo marayo daaweynta sidoo kale Aaladaha kale ee macaamiisha ee lagu dhiirrigelinayo nolol caafimaad leh, sida, miisaannada isku xiran ama kormeerayaasha wadnaha ee xiran, sidoo kale waa suurtagal IoT.